Markii ay burburtay dawladii dhexe ee Soomaaliya waxaa waayay malaayiin arday ah waxbarashadii ay u baahnaayeen ee marxaladaha kala duwan ee waxbarasho. Hadaba, si loo kordhiyo fidinta barashada luqada carabiga iyo dhaqanka Islaamkaba, lagana qayb qaadaato nabadaynta shacabka iyo xal u helidda dhibaatada Soomaaliya haysata, ayaa waxaa u istaagay furidda Jaamacadda Bariga Afrika rag aqoonyahano ah ayagoo kaalmaysanaya Odayaasha, maamulka iyo waxgaradkaba ku nool deegaanadan.
Jaamacaddaas oo ku taal gobolka Bari oo kamid ah gobolada la magacbaxay "puntland" gaar ahaan magaalada Boosaaso, gobaladaas oo ay ka jirto xasilooni marka loo eego gobalada kale ee Somaliya, ahna meelaha gaaray horumarka la taaban karo muddadii burburka.
Waxaa Jaamacadda Bariga Afrika si rasmi ah loo furay markay taariikhdu ahayd 23/10/1999 waxaana lagu bilaabay 95 arday oo ahaa ardaydii kasoo baxday dugsiyada sare , kuwaasoo loo furay koorasyo barashada luqada carabiga, ingiriiska iyo xisaabta.
1/10/2000 waxaa si rasmi ah loo furay waxbarashadii Jaamacadda oo lagu bilaabay labo kulliyadood oo kala ah: Kuliyadda Shareecadda iyo kuliyadda Maamulka waxaana is diiwaan galiyay arday tiradoodu ay ku dhawdahay 200 oo arday ahna arday horay usoo dhamaystirtay waxbarashada dugsiga sare. Waxaa la furay kulliyadda Kombiyuutarka September 2003.
Xarunta Jaamacadda Bariga Afrika waxa ay ku taallaa meel u jirtaa bartamaha magaalada Bosaso in ku dhow 5 Km dhinaca koofur bari ee magaalada, dhulka ay Jaamicadda leedahay wuxuu dhan yahay (554x888) = 491952 mitir laba jibaaran oo u dhiganta 49.19 Hector. Waxaana la dhagax dhigay 1/3/2000.
Yoolalka Jaamacadda waxaa ka mid ah:
Ka haqab tiridda ubadkeena baahida loo qabo tacliin sare si ay ugu diyaariso dhalinyarada Soomaaliyeed hogaanka bulshada ee mustaqbalka.
Diyaarinta dad u tababaran daboolidda baahida bulshada kana qaybqaadan kara xal uhelidda dhibaatooyinka kala duwan ee bulshadeena.
Qabashada siminaaro kala duwan oo la xiriira horumarka tiknoolajiyada casriga si kor loogu qaado waxqabadka bulshada.
Hagaajinta heerka tacliinta asaasiga ah ee goboladan iyadoo loo diyaarinayo macallimiin si wacan loo tababaray.
Jaamacaddu hada waxay leedahay saddex gole oo maamul oo kala ah:
Golaha sare ee Jaamacadda ( Board Of Trustees )
Golaha Umanada Jaamacadda ( Board Of Directors )
Golaha fulinta ee Jaamacadda ( Executive Board )
Waxay ka kooban tahay Jaamacaddu haatan Afar kulliyadood oo kala ah:
Kulliyada Shareecada iyo Daraasaadka Islaamka
Kuliyada waxbarshada ee Gobalka Kaalkacayo waxaana labilaabi doonaa sanadka soo socda bilowgiisa 2005 in shaa allaah.
Macadka Caafimaadka oo lagafuri doono Kaalkacayo.
Ardayda iska diiwaangalisay kulliyadahaas waxay gaarayaan ilaa 500 arday oo rag iyo haween ba isugu jira badankooduna ay yihiin arday joogta ah, qayb yarina ay tahay arday aqoondirsad ah. Waxayna bilaabatay daraasada Jaamacaddu 1/10/2000.
Manhajka Jaamacaddana waxaa lagu jaangooyay 8 simistar oo u dhiganta wakhti ahaan 4 sano.
Baahida taagan ee Jaamacadda ($216,364 Dollar)
Sidaad ogtihiinba waxay Jaamacaddu ku socotaa dadaal ay la yimaadeen dad isxilqaamay, mana ay jirto cid si rasmi ah u istaagtay socodsiinta Jaamacadda.
Runtii dhinac bahda ganacsatada waxay Jaamacaddu quud daraynaysaa waxqabadkooda iyo taageeradoodaba, taasoo ayagana u ah sharaf iyo qiimo dheeri ah.
Waxaan halkaan idiinku soo gudbinaynaa baahida taagan ee Jaamacadda, anagoo rajaynayna waxqabadkiina:
1- Waxay gobolladaani dhib wayn u qabaan in laga furo kulliyadda Macallimiinta, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay Macallin tababaran oo tayada waxbarashada kor u qaada, waxay Kulliyaddu u baahan tahay saddex laab oo waaweyn waxaa lagu qiimeeyey $57,000, waxay Jaamacaddu gacanta ku haysaa ($17,000), waxaa naga dhiman ($40,000).
2- Waxaan baahi xoogle u qabnaa saddex macallin oo aan ka keenayno India iyo meelaha la midka ah sida Pakistan, wuxuuna macallinkiiba u baahan yahay bishii lacag dhan: ($500 mushaar + 150 Ijaar) = $650, sanadkiina = (12x650) = $7,800. Saddexdii Macallin waxay u baahan yihiin lacag dhan: (3X7800) = $23,400
3- Ardayda dhigata in badan ayaan awood u lahayn in iska bixiyaan Fee ga daraasada, waxayna baahi u qabaan inay waxbartaan, waxaan u baahannahay in 60 arday laga bixiyo Fee ga oo ah sanadkii $300, (60X400) = $24,000.
4- Sidaad la socotaanba Jaamacadda way xiran tahay waddadeedii rasmiga ahay sababtoo ah waxay u baahan tahay hagaajin, waxaa lagu qiimeeyey kharajka waddadaas lagu samaynayo lacag dhan $18000, waxaan u haynaa $2,500, inta soo hartay oo dhan ($15,500) ayaan u baahannahay.
5- Cuntada ardayda waa culays saran Jaamacadda, ardaygii waxaan u qoondaynay ($30), hadddaba 20 arday waxay muddo 8 bilood ah u baahan yihiin lacag dhan (20X30X8) = $4,800
6- waxaa baahi aad ah ka taagan tahay dhismaha lix fasal maadaama maamulka Jaamacaddu hadda dagan yahay Fasaladii waxbarashda.
7- Waxaa kale oo jira kharashaad badan oo Jaamacaddu gasho sida Mushaar macalimiin Somali ah, Stationery and supplies, shidaal, IWM
8- Jadwalkan ka eeg baahidoo kooban:
a) Mushahar (macalimiinta) 105,024
b) Mushahar (maamulka) 19,080
c) Mushahar(Ilaalo) 3,960
d) Raashinka ardayda 8,100
e) Dayactirka 4,200
f) Safarda 8,400
(Miisaaniyadda �Waa socotaa)
g) Procurements 12,500
h) Supplies/Stationary 14,220
i) Minxooyinka oo dhan 8,800
j) Shidaal/saliid 11,880
Wadar kharashka 196,164
a) Rusuumta ardayda 291 arday x $400 =$116,400
50 arday x $500 = 25,000
b) Diiwaangelinta 8,500 149,900
Kharashka Saa�idka ah $ 46,264
Baahidda kale ee Jaamicadda:
Laababka Kulliyadda Macallimiinta
Saddex Macallin oo Ajnabi ah Kharajkooda
Fee 60 arday oo aan iska bixin Karin
Hagaajin waddada Jaamacadda
Cuntada 20 arday oo kiiba $30 rabo bishii
Shidaalka $500� 12 bilood
Dhismaha 6 Fasal
Kuraas iyo miisas 200x$20
2 Qol Gargaarka degdega ah ee Jaamicadda
9. waxaan la socodsiinaynaa wax garadka halkan iskugu yimid in aan kal hore sidaan oo kale usoo bandhignay baahida Jaamacadda, dadka nagala soo qaybgalay fadhigaas ay jaamacadda ugu deeqeen lacag dhan $9,841 hoosna waxaa ku cad siday ukala bixiyeen Deeqda:
C/naasir M. (Alfadli)
Maamulka Jaamacadda | 1/10/2004
Qoraalkan kala xiriir: Axmed Sahid <asaahid@yahoo.com>